Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 18/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အင်းဆက်ကိုက်ခြင်းဟာ အပေါက်များ၊ စုတ်ပြုဒဏ်ရာများ ဖြစ်စေပါတယ်။ အင်းဆက်ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ အင်းဆက်ရဲ့ တံတွေးတမျိုးကြောင့် နာကျင်မှုနဲ့အတူ အရေပြားလက္ခဏာများ ချက်ချင်းပေါ်လာပါတယ်။
မီးပုရွက်ဆိတ်နဲ့ ပျားတုပ်ခြင်း၊ နကျယ်ကောင်၊ ပဆုပ်ပနီကောင်ကိုက်ခြင်း စတာတွေဟာ အမျးအားဖြင့် နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ခြင်၊ သန်း၊ မွှား စတာတွေကိုက်ရင် နာကျင်မှုထက် ယားယံခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အင်းဆက်နဲ့ ပင့်ကူကိုက်ခြင်းတွေဟာ အဆိပ်ကြောင့်သေနိုင်ပြီး မြွေကိုက်ခြင်းမှာထက် ပိုပြီးသေဆုံးနှုန်းများပါတယ်။
အကောင်ကိုက်ခြင်း၊ တုပ်ခြင်းများအားလုံးဟာ မတူပါဘူး။ ကိုက်လိုက်တဲ့အကောင်အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ရှေးဦးသူနာပြုနည်းနဲ့ ကုသမှုတွေ ကွဲပြားပါတယ်။ တချို့အမျိုးအစားတွေဟာ တခြားအကောင်တွေထက် ပိုပြီး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ လူတချို့ဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ပိုပြီးဆိုးရွားစွာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ပိုသိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အကိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ ကြုံရပါတယ်။
လူတချို့မှာ ပျားတုပ်ခြင်း၊ အင်းဆက်အကိုက်ခံရခြင်း တို့ကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့ အသက်အန္တရာယ်တွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဆိုးရွားသော ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် သွေးလန့်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေဟာ လျင်မြန်စွာဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး အချိန်မီ မကုသရင် သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးရွားစွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းမှာ အောက်ပါအခြေအနေများ ပါဝင်ပါတယ်။
အထက်ပါဖော်ပြချက်တွေမှာ မပါသေးတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ လက္ခဏာ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှုရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
နှုတ်ခမ်း၊ မျက်ခမ်း၊ လည်ချောင်းများ ရောင်ရမ်းခြင်း
မူးဝေခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အောက်ပါအကောင်များဟာ ကိုက်ပြီး သွေးစုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပြင်ပမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း တောင်တက်ခြင်း စတဲ့ ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း စတဲ့အခါမှာ အကိုက်ခံရနိုင်ခြေ များပါတယ်။
လက်၊ ခြေထောက် စတဲ့ ပေါ်လွင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကိုက်ခံရများပါတယ်။ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကတော့
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အင်းဆက်ကိုက်ခြင်းကို အတည်ပြုဖို့ စစ်ဆေးချက်တွေ မပါဝင်ပါဘူး။ အရေပြားပေါ်မှာ အင်းဆက်ပိုးကောင် တွေ့ရပြီး သူတို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်သလား မဖြစ်သလား သိရအောင် စစ်ဆေးဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တခြားဖြစ်နိုင်ခြေပြသနာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီးရင် ကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အင်းဆက်အဆိပ်ဓါတ်မတည့်မှုစစ်ဆေးခြင်း။ အရေပြားပေါ်မှာ အင်းဆက်အဆိပ်ဓါတ်တချို့ ထိတွေ့စေပြီး ဓါတ်မတည့်မှု ဘယ်လို ဖြစ်ပွားသလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွှားကိုက်၍ ပိုးဝင်ကာ အဆစ်ရောင်ခြင်း (Lyme ရောဂါ)။ အရေပြားထဲကနေ မွှားကိုရှာတွေ့ရင် ဖယ်ထုတ်ပြီး Lyme ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါတယ်။
ပိုးမွှားကိုက်ခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရုံသာရှိပြီး ဆိုးရွားကြာရှည်တဲ့ ပြသနာတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ ရောဂါပိုးဝင်ပြီး ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပွားပြီး သေစေနိုင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ကုသခြင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
Bites And Stings (ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပိုးမွှားကိုက်ခံရခြင်းဟာ ပုံမှန်တွေ့နေကြဖြစ်ပြီး အသေးအဖွဲတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိပ်ရှိရင်၊ ရောဂါပိုးကူးနိုင်ရင်၊ ဓါတ်မတည့်ရင် အရေးပေါ်ကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ တိကျတဲ့ရောဂါရှာဖွေမှု၊ အချိန်မီ ကုသမှုတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အင်းဆက်ကိုက်ခြင်း အများစုမှာ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်ပါတယ်။ အတော်အတန် ပြသနာလောက်ဆို အိမ်မှာပဲ ကုသနိုင်ပါတယ်။
ပိုးမွှားကိုက်ခြင်းကို ဓါတ်မတည့်ဖြစ်တတ်ရင် ကိုယ်ခံအား ကုသမှု (အာရုံတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ပါးစေခြင်း)ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးမွှား အကိုက်ခံရခြင်းအတွက် ဓါတ်မတည့် တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း အတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
အရည်ကြည်ဖုများ။ အင်းဆက်အကိုက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရည်ကြည်ဖုများကို မဖောက်ပါနဲ့။ ပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။ အရည်ကြည်ဖုတွေကို ဖောက်လိုက်ရင် အောက်ခြေအရေပြားလည်း ပေါ်လာပြိး နာကျင်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရည်ကြည်ဖုနေရာတွေကို ပတ်တီးစည်းထားပါ။
အရေပြားယားယံခြင်း။ အကောင်ကိုက်တဲ့နေရာမှာ သေးငယ်တဲ့ အဖုအပိန့်နဲ့ ယားယံခြင်းတွေ သတိထားမိရင် ဆရာဝန်ဟာ ဟစ်စ်တမင်း ဆန့်ကျင်ဆေး၊ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်သောက်ဆေး စတာတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုဆိုးလာရင် ဆေးရုံဆေးခန်းပြပါ။
နေရာတဝိုက်လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ ကြီးမားတဲ့ ဓါတ်ပြုလက္ခဏာတွေဟာ အကောင်ကိုက်ခံရတဲ့တဝိုက်မှာ ပေါ်လာရင် ဟစ်စ်တမင်းဆန့်ကျင်ဆေးသောက်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းတာဆိုးရင် ဆရာဝန်ဟာ စတီးရွီုက်ဆေးတွေ တိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပြုမှုသေးရင်တော့ ရေခဲကပ်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထုံဆေး၊ စတီးရွိုက်လိမ်းဆေး၊ ဟစ်စတမင်းဆန့်ကျင်ဆေး စတာတွေဟာ နာကျင်ယားယံမှုကို သက်သာစေပါတယ်။ အရေပြားဟာ စုတ်ပြဲနေရင်တော့ လိမ်းဆေးတွေ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။ အကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ ယားယံနေပေမယ့် ကုတ်ဖဲ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အရေပြားတွေ စုတ်ပြဲရာကနေ ရောဂါပိုး ဝင်လာမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း တွက်ချက်ခြင်း (BMI) ။
ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း တွက်ချက်ခြင်း (BMI) ကို အသုံးပြုပြီး ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ရှိရဲ့လားဆိုတာကို တွက်ချက်ပါ။ ဒီကျန်းမာရေး ကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး ကလေးရဲ့ (BMI) ကိုလည်း တွက်ချက်လို့ ရပါတယ်။
1. Insect Bites. http://ehealthforum.com/health/insect_bites-e424.html. Accessed 10 Jan 2017
2. Insect bites and stings: First aid. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. Accessed 10 Jan 2017
3. Insect bites and stings. https://medlineplus.gov/ency/article/000033.htm. Accessed 10 Jan 2017
4. First Aid for Bites and Stings. http://www.healthline.com/health/first-aid/bites-stings#Overview1. Accessed 10 Jan 2017
အရည်ကြည်ဖုလေးတွေကို သက်သာစေဖို့ အိမ်တွင်းကုထုံး
တံခါးညပ်တဲ့အခါ ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ကြမလဲ။